“ကိုယ့်မှာ ရှိတာကို ပြပြီးစားချင်လို့ မော်ဒယ် ဝင်လုပ်တာ” လို့ အလှမယ်ရွှေအိမ်စည်က ပုရိသတွေကို ပြောပြီ(ရုပ်သံ) – Zartiman
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကို ပြမစားရရင် ဘာကို ပြစားရမလဲ? ကျမ ရဲ့ ရင်သားတွေက ဘယ်သူ့ကို ဘာ လုပ်ထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမ်းတွေ Feel ဖြစ်ပြီးတော့ လိုက်ရန်တွေ မူနေကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါကြီးက ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ ပေးနေတာပါ” လို့ ပြောလာတဲ့ အလှမယ် ၊ မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် ရွှေအိမ်စည်အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ အရာတှကေို ပွမစားရရငျ ဘာကို ပွစားရမလဲ? ကမြ ရဲ့ ရငျသားတှကေ ဘယျသူ့ကို ဘာ လုပျထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမျးတှေ Feel ဖွဈပွီးတော့ လိုကျရနျတှေ မူနကွေတယျ။ တကယျတော့ ဒါကွီးက ပြျောရှငျမှုတှပေဲ ပေးနတောပါ” လို့ ပွောလာတဲ့ အလှမယျ ၊ မျောဒယျ ၊ သရုပျဆောငျ ရှအေိမျစညျအကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ရင်ခုန်စရာ အမူအရာလေးတွေနဲ့ ပို့စ်ပေးဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
ရင်ခုန်စရာကောင်းလှတဲ့ ရွှေကစ် ရဲ့ ရေကူးကန်ထက်မှ အလှ